Tsy ampy ny fampahafantarana : nanomboka ny « Tsenam-boky » andiany faha-14 | NewsMada
Tsy ampy ny fampahafantarana : nanomboka ny « Tsenam-boky » andiany faha-14
Anisan’ny saro-toerana eo anivon’ny ankohonana sy ny fiarahamonina malagasy ny boky. Antony maro ny mahatonga izany. Miezaka ny manarina ny lesoka ireo mahatsapa andraikitra sy vonona ny hanefa adidy.
Nosokafana, omaly, teny amin’ny zaridainan’Antaninarenina ny « Tsenam-boky » andiany faha-14. Tsikaritra teny an-toerana ny tsy fahampian’ny fampahafantarana. Saika gaga ny ankamaroan’ireo mahita ! Tsy niomana ny hijery na hitsidika ny sasany fa mivily satria sendra mandalo. Na izany aza, tazana fa liana tanteraka ireo nitsidika ny tranoheva tsirairay. Tao ny voasariky ny boky amin’ny fiteny malagasy, nisy ny voasinton’ireo boky tsy fahita firy intsony, ankehitriny. Teo koa ireo liana amin’ny boky amin’ny fiteny vahiny.
Tafa sy fakan-kevitra natao tamin’ireny olona nitsidika ireny no nahafantarana fa manomboka mitodika sy manazatra tsikelikely ny zanany hamaky boky ny Malagasy. Mitombina hatrany ny filazan’ny mpandinika fa « loharano tsy ritra » izy io, na eo aza ny fihazakazaky ny teknolojia isan-karazany. Tsy nisalasala ihany koa anefa ireto ray aman-dreny ireto nilaza fa tsy mahafa-po ny politikan’ny boky eto Madagasikara.
Talohan’ny taona 1972, nitana ny laharana voalohany taty amin’ny kaontinantan’i Afrika tamin’ny famakiana boky ny Malagasy. Mari-pandrefesana tamin’izany ny isan’ny boky lafo miohatra amin’ny isan’ny mponina. Ankehitriny, na tsy nisy intsony aza izay fandrefesana izay, azo antoka fa tsy laharam-pahamehana ho an’ny tokantrano malagasy ny fividianana boky. Mila itadiavam-bahaolana haingana io tranga io satria tsy antony iray na roa no mahatonga izany fa maro.